Xil wareejin ka dhacdey Galkacayo
10 Feb 10, 2013 - 7:50:55 AM
ay xilalka kula kala wareegayeen Duqii hore ee degmada Gaalkacyo iyo kan dhawaan loosoo magacaabay,ayaa maantey 10 February,2013 lagu qabtay hoolka shirarka mamulka gobalka Mudug,waxana munaasibadaasi kasoo qayb galay xubno ka socday xukumadda,xildhibaano,mamulka gobalka iyo shaqalaha dowlada hoose
Bilowgii kulankaasi waxaa ka hadlay Duqii hore ee degmada Gaalkacyo Col,Siciid Cabdi Faarax,wuxuna xusay inuu ku farax san yahay xilka qaadista uu Dr.Faroole ku sameeyay,wuxuna sidoo kale ka sheekeeyay
waxyaabihii u qabsoomay tan iyo waqtigii uu xafiiska Gaalkacyo joogay.
Arimaha uu xusay Col.Siciid Cabdk Faarax ee uu wax ka qabtay ayaa waxaa ka mid ah hagaajinta wadooyin ku yaala Gaalkacyo,banaynta wadooyin kale oo ay dageen shacabka magalada,wuxuna sidoo kale balan qaaday inuu si wanaagsan oo aan gabasho lahayn ula shaqayn doono mamulka
cusub ee gaalkacyo loosoo magacaabay.
Dhinaca kale waxaa kalmado hadal ah goobta kasoo jeediyay duqa cusub ee Gaalkacyo oo horayna Gudoomiyaha gobalka Mudug usoo noqday Col.Axmad Cali Salaad,wuxuna sheegay inuu ku farax san yahay qaabka wanaagsan ee uu xilka ugu wareejiyay duqii hore Col-Siciid ,wuxuna sidoo
kale sheegay inuu wax badan ka qaban doono arimaha nabadgalyadda,horumarinta degmada iyo waliba hagaajinta wadooyinka magaladda.
Masuuliyiintii munaasibadaasi ka hadlay ayaa mamulka cusub kula dardaarmay inuu wax badan ka qabto xaalada Gaalkacyo,waxana ka mid ah masuuliyiinta dardaarka soo jeediyay wasiir ku xigeenka arimaha gudaha Puntland ,wuxuna sheegay Col.Axmad Cali Salaad in looga baahan yahay baahinta mamul wanaaga iyo waliba ka shaqaynta horumarka degmada Gaalkacyo.
Sidoo kale wasiir ku xigeenka arimaha gudaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la helo gollahii deegaanka Degmada gaalkacyo oo shaqaynaya,wuxuna sidoo kale tilmamay mamulka cusub ee Gaalkacyo ka wasaarad ahaan inay ula shaqayn doonan si wanaagsan.
Ugu danbayntii munaasibadda xil wareejinta mamulka Gaalkacyo ayaa si wanaagsan kusoo dhamaaday,waxaana dardaarka ka sakow goobta laga
soo jeediyay khudbado u badan sidii looga wada shaqayn lahaa horumarka Gobalka mudug.
Halkan ka dhageyso Codka Duqii hore ee degmada Galkacayo